Webs handrafetana CV tany am-boalohany Famoronana an-tserasera
Mba hamolavolana fandaharam-pampianarana tany am-boalohany amin'ny fomba matihanina sy mahomby, afaka mifidy fomba roa hafa isika. Ny voalohany sy indrindra atolotry ny ambaratonga fanaingoana omena azy dia ny fampiasana ireo fandaharana ireo. Manoro hevitra anao aho mba ho tompon'andraikitra amin'ny famolavolana ny resume satria amin'ity fomba ity dia azonao atao ny maneho ny tombo-kasenanao amin'ny fomba mangarahara sy malalaka kokoa.
Na izany aza, amin'ny tranonkala dia misy pejy vitsivitsy izay afaka miasa ho sehatra mahaliana toy izany mba hahazoana endrika izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao amin'ny fotoana rehetra. Androany dia handinika ny sasany amin'izy ireo isika:
2 CV CV
Na eo aza ny zava-misy fa ity pejy ity dia misafidy endrika mavesatra sy nentim-paharazana kokoa, dia mety ho safidy tsara hafa izy io noho ireo fotodrafitrasa sy fitaovana fanampiny omeny. Avy amin'i Audere, torohevitra sy fampahalalana tena ilaina atolotra handresena ireo fizotran'ny fifantenana ao anaty resadresaka momba ny asa ary manome torolàlana feno ihany koa izay hahatonga ny fizotrany ho lasa intuitive kokoa sy haingana kokoa noho ny mahazatra. Raha vantany vao vita ny resume dia azonao atao ny mampiasa safidy marobe hahazoana ny fisie farany amin'ny ambaratongam-pahaizana isan-karazany ary na dia manonta mivantana ny fanaovana pirinty amina kopia maromaro aza ianao, na dia premium aza ity safidy ity ka mila mandoa vola alohan'ny hidirana ianao izany.
Mitandrema mba hampiditra ny fampahalalana rehetra momba ny resume anao ary rehefa vitanao izany dia tsy maintsy manova ny fisehoany sy ny endriny amin'ny tsindry vitsivitsy fotsiny ianao. Ny pejy dia ho tompon'andraikitra amin'ny fanitsiana ny atiny ho azy ary amin'ny fiheverana ny endrika ampiasanao. Izy io dia miasa amin'ny rafitry ny maodely hisafidianana, na dia manapa-kevitra ny hahazo ny drafitra premium aza ianao dia hanana modely marobe sy fitaovana hafa izay hanampy anao hiatrika ny fizotran'ny safidy amin'ny toerana misy anao. Voadika amin'ny fiteny maromaro izy io, raha tsy diso aho 8 (mazava ho azy fa misy kinova espaniola) ary ny pejiny lehibe dia mitatitra hatrany izay drafitra ahazoana fahombiazana lehibe indrindra amin'ireo mpampiasa ny vondrom-piarahamoniny.
Miaraha miasa amin'ny rafitra Europass, dia ho fantatrao fa io ilay rafitra ofisialy novolavolaina sy notendren'ny Vondrona Eropeana ary tanjona ny hamorona fenitra handrefesana ny fahaiza-manao sy ny fahaizan'ny kandidà tsirairay. Ny singa matihanina, matotra ary henjana omen'ity rafitra ity dia mety ho teboka fanampiny amin'ny fomba anehoanao ny tenanao amin'ny fizotry ny fandraisana mpiasa. Ny dingana dia manana dingana vitsivitsy ary miasa ihany koa amin'ny alàlan'ny rafitra modely. Tsy mila misafidy ilay mifanentana amin'ny fombanao ianao ary manitsy azy araka izay itiavanao azy. Manolotra fotodrafitrasa izy rehefa mizara ny fandaharam-pianarana amin'ny tambajotra amin'ny alàlan'ny URL manokana ary mazava ho azy fa safidy koa amin'ny fampidinana azy. Ho fanampin'izay, manana bilaogy mifanindran-dàlana izy izay atolotra ny atiny mifandraika amin'ny fizotran'ny fifantenana. Tena mahaliana!
Ity safidy ity dia miavaka amin'ny fahafaha-manolotra arosony rehefa manondrana ny CV. Raha hampiasa ny serivisy dia mila misoratra anarana aloha ianao ary avy eo misafidy ireo modely mety aminao indrindra. Ao anatin'ireo tolo-kevitr'izy ireo no ahitantsika ny azo anontana sy ny hafa natao hamboarina amin'ny fitaovana sy telefaona finday miaraka amina endrika mamaly. Izany dia hiantoka fa afaka miditra amin'ny piraofilina matihanina na aiza na aiza misy anao ny mpandray anao. Mila milaza aho fa ity karazana modely ity dia misy amin'ny kinova premium ary mitentina 40 € isan-taona. Raha manapa-kevitra ny hijanona amin'ny drafitra fototra ianao dia ho afaka hiditra amin'ny maodelin-tserasera telo, ny iray amin'ny PDF ary ny iray hafa hamaly.
Anatin'ireo safidy hafa rehetra omenay amin'ity safidy ity dia ity angamba no mpamorona indrindra, satria i Vu dia manome antsika ny fahafaha-manome endrika ny zava-kanto kokoa sy ny hatsarana am-boalohany mitovy amin'ny an'ny infografika. Ao amin'ny volavolanao dia azonao ampidirina ireo fahombiazana miavaka indrindra amin'ny asanao matihanina, voarindra sy voarindra amin'ny sokajy. Raha hampiasa an'ity sehatra ity dia mila misoratra anarana ianao ary avy eo dia ho tena tsotra be ny fizotrany. Anisan'ireo tanjany ny fahafahan'ny fanafarana ny angon-drakitra ataonay mivantana avy amin'ny tambajotra sosialy LinkedIn par tsara indrindra. Safidio ny maodelinao, ampio widgets raha mandinika azy ianao ary mizara ny zavatra noforoninao. Mora, haingana ary matihanina. Manoro anao izany aho!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Tranonkala hananganana CV tany am-boalohany